IMadden NFL 21: Umhla wokuKhutshwa, amanqaku amatsha, abadlali kunye nokunye - Ezemidlalo
UMadden 21: Yonke into ekufuneka uyazi ngoMdlalo weVidiyo eNtsha
IMadden 21 , ulongezo lwamva nje kwi-franchise eneminyaka engama-32 ebizwa ngokuba ngumqeqeshi odumileyo weNFL kunye nomsasazi uJohn Madden, sele eza kuyeka. Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga nomdlalo, ukusuka kwiimowudi ezintsha, ukulinganiswa okutsha, imowudi entsha 'yeYard', isandi, kunye nokunye.
Ukukhutshwa komhla kunye noku-odola kwangaphambili
IMadden 21 iya kukhutshwa ngolwe-Lwesibini yePS4, Xbox One, kunye nePC. Ngumdlalo wokuqala waseMadden ukufumana ukukhululwa komdlalo wesithoba wevidiyo yemidlalo kamva kulo nyaka.
Iya kufumaneka kwi-Xbox Series X ukuqala ngo-Novemba 2020. Iya kukhutshwa kwi-Playstation 5 nakwiStadia phambi kokuphela konyaka. Kwaye ukuba uyithenga kwisizukulwana sangoku sehardware? Uyakwazi ukuphucula kwisizukulwana esilandelayo simahla. Izinto ezintle.
Ukuba awukwazi ukulinda de kube ngu-Agasti 25 ukuze ubeke izandla zakho kuwo, IMadden 21 ziya kufumaneka ukujonga kuqala ukuqala ngolwesiHlanu. Ukudlala, kufuneka ube nokubhaliselwa kwe-EA Play, okuya kukuxabisa i- $ 4.99 ngenyanga okanye i- $ 29.99 ngonyaka. Ngenxa yoko, uyakufumana iiyure ezili-10 zokudlala ngomdlalo omtsha kule mpelaveki, ngaphambi kokumiliselwa.
Ibhonasi yoku-oda kwangaphambili
Ukuba u-odola kwangaphambili kule mpelaveki, kukho ezinye izinto ezongeziweyo.
I-oda yangaphambi koHlelo oluPhambili ixabisa i $ 59.99 kwaye iza ne:
1 yabangama-32 Abadlali abavela kwiPakethi yeQela le-NFL ye-Elite
5 IMadden Iipakethe zeFantasy zeQela lokuGqibela leQela
1 Ikhethi yakho engafaniyo oyikhethileyo
I-MVP Edition yangaphambi koku-odola ixabisa i $ 79.99 kwaye iza ne:
I-1 ye-32 yeqela le-NFL Iipakethe ze-Elite
Iipakethe zeFantasy zeQela leGolide ezi-5
1 -Iphepha lakho lokukhetha elingafaniyo
Ukufikelela kwangoko kweentsuku ezi-3
Iipakethe zeFantasy zeQela le-MUT eli-7
Yodwa IMadden NFL 21 umxholo
I-MVP Edition yangaphambi koku-odola ixabisa i $ 99.99 kwaye iza ne:
1-Ukhetho lwakho lwePakethe engafaniyo
Amandla oLuhlu lweLamar Jackson Elite
Iipakethe zeFantasy zeQela leGolide ezili-12
Iphakethe yoQeqesho oluKhulu eyi-1
Ipakethe ye-MCS Ultimate Champion
1 I-Lamar Jackson Elite Into
YiBaltimore Ravens quarterback kunye ne-2019 MVP Lamar Jackson. Ayisiyongxaki ukuba iRavens ikwangamaqela athandwa kakhulu IMadden 20 ; Indawo yesibini neyesithathu yayiyi-Dallas Cowboys kunye neeNtloko zeSixeko saseKansas, ngokwahlukeneyo.
Umdlalo omtsha ugcina uphawu lweSuperstar / X-Factor ukusuka IMadden 20 . Kugcinelwe ezona zintle, kanye kwisizukulwana sabadlali, Amandla aSuperstar ahlala 'ekhona,' ngelixa i-X-Factors nganye ine-trigger kwaye emva koko ibhuqekile kumdlali lowo.
Umzekelo, ukuba ikota yakho yangasemva ine-'Gambler 'X-Factor kwaye iyakwazi ukugqibezela imidlalo emithathu ilandelelana yee-5 + iiyadi nganye, i-AI ayizukukwazi ukuphazamisa ukupasa kwayo ide ipholile emva kokungagqitywa kwesi-2.
esona sitshixo sihle kwi-nba 2k16
Entsha ku IMadden 21 'Yiyadi,' ngamava angacwangciswanga ngakumbi apho udlala khona ibhola ngasemva kwi-6-on-6 formations. Umzekelo, njengaxa ubudlala ibhola ngexesha lekhefu , kukho ukubala kweblitz (1 iMississippi, 1 iMississippi… ') ngaphambi kokuba uyirholekwikota yesibiniIsitshixo sokuphumelela kwiYadi kukuba ngumntu ophethe ibhola oyilayo onokucinga ngokubhabha.
Isiphelo esomeleleyo seChiefs City sithethe 'ngeYadi' kwisiqendu samva sePodcast yoLawulo loMthwalo.
Intshatsheli Super Bowl & amp; esinye sezona ziphelo zibalaseleyo zomdlalo! @kweenkanye ujoyina ipodcast ukuthetha:
- Ixesha leSuper Bowl LIV / 2020 yeNFL
-Iindawo zokudlala zeNBA
Isiqendu: https://t.co/gq3yj65s1U pic.twitter.com/30RiMaClep
-Imidlalo yeComplex (@ComplexSports) Nge-18 ka-Agasti ka-2020
Kwi 'Yard,' akukho kukhaba emva kwebala, kodwa unokufumana amanqaku ongezelelweyo ngokuzalisekisa iimfuno ezithile. Umzekelo, uya kufumana amanqaku amabini ongezelelweyo kumdlalo wokuchukumisa oquka ukupasa kabini okanye ukubuyela umva. Uya kufumana inqaku elinye elongezelelekileyo lokufumana amanqaku angaphezulu kweeyure ezingama-40, okanye ngokufumana ithuba.
Abadlali abadala banokukhumbula uvuyo lwesitrato seNFL (2004), esikuvumela ukuba udlale ibhola ngemithetho yokudlala, idityaniswe nezakhono zabadlali abakhethekileyo. Ukuba uyayithanda ibhola, kodwa udiniwe yiyo yonke into uziva ungena kwi-NFL, iYard isenokuba yile nto ubuyikhangela.
IMadden 21 uhambe ngendlela yemidlalo emininzi ngaphambi kwayo kwaye wongeza 'umatshini wokukhohlisa' ophethe ibhola. Ungayama ngentonga yasekunene ngokudibanisa eyahlukeneyo ukuya kwi-juke, ukujikeleza, kunye nokuphazamisa indibaniselwano engenamthungo. Oku kufuneka kuyenze ifikeleleke ngakumbi kubantu abafikayo nangakumbi kwigophe lokufunda kumasiko nezithethe.
I-faze censor yadibana njani ne-yanet
Iqela laseMadden lokuGqibela leZakhono zokuSebenzisa
Inkqubo ye- IMadden Imowudi yeQela lokuGqibela iya kufumana umgangatho wokulungiswa kobomi, kodwa olona tshintsho lubonakalayo kukumatshini onobuchule. Awusenamda ekuphuculeni amandla abadlali abathathu kwisikhubekiso kunye nabadlali abathathu kukhuselo; Endaweni yoko, unikwa inani elimiselweyo lamanqaku okwazi ukukhubekisa, ukuzikhusela, kunye namaqela akhethekileyo, onokuthi emva koko uwahambise ngendlela othanda ngayo.
Isithethi esijonge uluntu IMadden 21 ngu-Spokesplayer, umlingiswa owenziwe ngumdlali weqonga uKeraun Harris ( Ukungaqiniseki , Umnyama-ish ). Ingcinga ecocekileyo, kodwa yeyona inokubuyisa umlilo (ngakumbi iKeraun!) Ukuba umdlalo awuphili ngokuvutha
Ukulinganiswa komntu ngamnye kumdlali ngamnye kuhlala kungumbono ophambili kunye nolonwabo-uninzi lwazo zonke abadlali ngokwabo. I-EA inesiseko sedatha esinokukhangelwa kuwo wonke umdlali kunye nenqanaba lakhe ngokulandelelana igosa IMadden indawo .
IMadden 21 Ingoma esemthethweni iya kukhutshwa kwakhona nge-28 ka-Agasti. Uluhlu lomculo lungezantsi. Ungalujonga kwangaphambili uluhlu lokudlalwayo kwiSpotify nakwiApple.
1. UAnderson .Paak feat. URick Ross 'SIKA EM'
2.I-KRIT enkulu 'KHABELA NGAPHANDLE'
3. IBlacc Zacc 'Iflegi kuDlala Dlala'
4.blackbear 'lil bit'
5. Ubuntwana obukhulu & amp; JACE 'Khaba'
6. UMhlabagang 'Unikwe amandla'
7. HDBeenDope 'Phezulu'
8. UJack Harlow 'Ngokuzenzekelayo'
9.Intshatsheli kaJucee Froot '
10. Lute feat. Umphefumlo we-Blakk 'Yifumane Uhambe'
11. NEZ feat. DUCKWRTH & amp; Umsebenzi waseSaint Bodhi '
12.Akukho ntlawulo 'Yiphumelele kwakhona'
13. Ukuthanda iqela & amp; UJAHMED 'UMSEBENZI'
14. Smino nge Monte Booker & amp; Iidramu 'zePastst Pass Pass'
15.Ukujikeleza kweNtombazana uStunna (Umxube woMdlalo) '
16. UTerrell Hines 'Emlilweni'
17. Ukuziphindezela kweTokyo 'Ukungakhathali'
18. Yungblud & amp; UDenzel Curry 'LEMONADE'
Akukho mgangatho uphuculo lobomi. Kukho ugxininiso oluhlaziyiweyo kulawulo lwesakhelo esisekweni. Kodwa ukugxekwa kwi-Intanethi kujolise kuko IMadden 21 (Ngokukodwa, imo ye-franchise) ikwayiloo nto ijolise kuzo zonke iifrigisi zonyaka: ngaba oku kukuphinda ubeke kwakhona umdlalo wakudala, okanye into eyingqayizivele neyonwabisayo yodwa?
Ewe kukho izinto eziphinde zafakwa. Zizo zombini izibonelelo kunye nokubuyela umva kumdlalo welifa ophakamisa amanqaku akhe obuchwephesha kwisithuba seminyaka. Ekugqibeleni iyehla iye kubhaliso lwengqondo; uzimisele ukuhlawulela amava asemgangathweni afana namava omgangatho owawenawo ngaphambili, kwaye uyafuna ukuphinda uvuselele iinyanga ezili-12 ezizayo? Akukho mntu unokukuxelela ukuba ixabisa ntoni i $ 59.99; kuyehla ukuba uthanda kangakanani IMadden ekuqaleni. Ukuba ukuyo, siza kubona kwigridi. Kwaye ukuba akunjalo? Ubuncinci uyazi ukuba kuya kubakho olunye ushicilelo kunyaka olandelayo.
indlela yokugubungela ikhekhe ngomzekelo wetshokholethi
Uyenza njani ibhokisi ye-velvet ebomvu ikeyiki ukunambitheka okwenziwe ekhaya
Uyenza njani idonathi yekhekhe yasekhaya
ndiyikhuphe ngaphandle intombazana uphi ngoku
Iiresiphi zokupheka zekhekhe le-vanilla ukusuka ekuqaleni